Indlu egcwele indalo! - Indlu egcwele indalo! - I-Airbnb
Indlu egcwele indalo! - Indlu egcwele indalo!
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKonstantinos
Ikhaya leHolide 55sq.m. Kwindawo yeehektare ezili-10 ezigcwele iibhanana, iiorenji, iminquma ejonge kwiMessinia Gulf kunye neTaygetos. Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo zasekhaya kunye ne-air-conditioner yokuhlala kamnandi. I-1.5 km nje ukusuka elunxwemeni.
Ikhaya leHolide 55sq.m. kwindawo yeehektare ezi-3 ezigcwele imithi yebhanana, imithi ye-orenji, imithi yomnquma ejongene ne-Messinia Gulf kunye neTaygetos.Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo zasekhaya kunye ne-air-conditioner ukuze uhlale ukhululekile. I-1,5 km nje ukusuka elunxwemeni.
Ngaphakathi kwendawo yeehektare ezili-10, kumgangatho ophantsi wendlu enamagumbi amabini yindlu ye-55 sq.m.Iqukethe i-12 sqm yokulala enebhedi ephindwe kabini, iitafile ezimbini ezisecaleni kwebhedi, indlu yangasese kunye ne-closet enkulu ekhululekile.Igumbi lokuhlambela li-5.5 sqm kunye nebhafu, i-sink, i-washing machine overload kunye ne-closet ye-50 cm x250 cm ephakamileyo yokugcina.I-38 sqm eseleyo yindawo evulekileyo ekhanyayo kakhulu, enemitha ye-4 yeglasi ejongene nolwandle kunye neyadi yangaphambili yendlu.Le glasi inezivalo zombane. Ngaphakathi kwesi sithuba kukho igumbi lokuhlala, kunye negumbi lokutyela elinezitulo ezintandathu.Ikhitshi ibonelela phantse zonke izixhobo zasekhaya eziyimfuneko ekutyeni kwakho kwemihla ngemihla.Kwicala elisezantsi legumbi kukho ibhedi yebhedi (iibhedi zamawele) kunye nesofa apho kukho enye ibhedi enye.Indawo ifanelekile ukuhlalisa usapho olunabantwana abathathu okanye bebonke abantu aba-5. Yintoni eyenza indlu ibe yinto ekhethekileyo ngaphaya kwayo yangaphakathi yintendelezo enkulu eyolula phambi kwe-150 sqm, apho ininzi ihlanganiswe ne-pergola.Indawo yokutyela yangaphandle enezitulo kunye nebhedi iyafumaneka ngaphandle. Ukuphola kunye nemvakalelo onayo kwindalo ishiya zonke iindwendwe ezineenkumbulo ezizodwa.Imoto ifika ngendlela yangaphakathi ngaphakathi kwendawo, ecaleni komnyango wendlu. Yindlu ezolileyo ejonge iMessinia Gulf kunye neTaygetos, elalini, engenakumangalisa wonke umntu ondwendwelayo.Ulwandle lwase-Agios Andreas, kunye nee-beach-bar kunye ne-marina, yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlamba imihla ngemihla njengoko i-1.5 km ukusuka endlwini.Le ndlu yindawo yokuqala yokutyelela i-Koroni, i-Methoni, i-Pylos, i-Petalidi kunye ne-exotic beach i-Chomati-Peroulia nje i-8 km kude.
Indlu ye-55 sqm ifumaneka kwisiqwenga seehektare ezili-10, kumgangatho ophantsi wendlu yemigangatho emibini.Iqukethe igumbi lokulala le-12 sqm kunye nebhedi ephindwe kabini, iitafile ezimbini ezisecaleni kwebhedi, indlu yangasese kunye ne-closet enkulu ekhululekile.Indlu yokuhlambela yi-5.5 m² enebhafu, isitya sokuhlambela, umatshini wokuhlamba ongaphezulu kunye nekhabhathi eyi-50 cm x 250 ukuphakama ukuze igcinwe.
I-38 sqm eseleyo yindawo eyodwa eqaqambileyo kakhulu, kunye ne-4 imitha ye-glazing ejongene nolwandle kunye neyadi yangaphambili yendlu.Le festile inezivalo zombane. Ngaphakathi kweli gumbi kukho igumbi lokuphumla kunye negumbi lokutyela elinezitulo ezintandathu.Ikhitshi libonelela phantse zonke izixhobo zasekhaya eziyimfuneko ekutyeni kwakho kwemihla ngemihla.
Kwicala elisezantsi legumbi kukho ibhedi (iibhedi ezimbini ezingatshatanga) kunye nesofa apho kukho enye ibhedi enye.Isiza sifanelekile ukusingatha intsapho kunye nabantwana abathathu okanye abantu be-5. Yintoni eyenza indlu ihluke ngaphaya kwendawo yangaphakathi yintendelezo enkulu eyolula i-150 square metres, apho ininzi ihlanganiswe ne-pergola.Igumbi lokutyela elineebhentshi kunye ne-swing liyafumaneka kule ndawo yangaphandle. Umbethe kunye nemvakalelo onayo kwindalo ishiya zonke iindwendwe iinkumbulo ezizodwa.
Imoto ifikelela kwindlela yangaphakathi ngaphakathi kwifa, ecaleni komnyango wendlu. Yindlu ezolileyo evalelweyo ejonge iMessinia Gulf kunye neTaygetos, elalini, enokothusa bonke abatyeleli.
Ulwandle lwase-Agios Andreas, kunye ne-beach-bar kunye ne-marina, yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlamba yonke imihla njengoko i-1.5 km ukusuka endlwini.
Le ndlu isisiseko sokutyelela i-Koroni, i-Methoni, i-Pylos, i-Petalidi kunye nolwandle olungaqhelekanga lwe-Chomati-Peroulia kuphela i-8 km kude.
Indlu ikwimitha nje engama-400 ukusuka kwimarike yaseLonga. Imakethi ine: imakethi encinci, indawo yokubhaka, ikhemesti, iikhefi, indawo yokwenza iinwele kunye neofisi kagqirha.
Indlu ikwimitha nje engama-400 ukusuka kwimarike yaseLongas. Imarike ine: imakethi encinci, indawo yokubhaka, ikhemesti, iikhefi, indawo yokwenza iinwele kunye neziko lonyango.
Inombolo yomthetho: 00001039103
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Logga